လက်ကိုင်ဖုန်း၏ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပျက်နေခြင်းရှိမရှိသိရန်နည်းလမ်း ၄ ခု | Androidsis
လက်ရှိတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်း၏ touch panel သည်၎င်း၏အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြwithနာကဖုန်းကိုမသုံးနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးအခြေအနေ၌ထားရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါပေမယ့် ပြproblemsနာတွေရှိနိုင်တယ် အတူတူ။
သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုသင်ချန်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင် panel ကမှားယွင်းစွာအလုပ်လုပ်နေသည်ကိုသင်သတိပြုမိသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, လက်ကိုင်ဖုန်း၏ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပျက်စီးခြင်းရှိ၊ မရှိသိနိုင်သည့်နည်းလမ်းများရှိသည်။ ဒီတော့ဒီအခြေအနေကိုဖြေရှင်းဖို့ငါတို့တစ်ခုခုလုပ်နိုင်တယ်။
ယနေ့ခေတ် touch panel ပျက်စီးသွားပြီလားဆိုတာကိုပြောပြဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လည်းရှိသည် applications များ ဒီအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်လျှင်သိရန်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာ။ ဒါကြောင့်ငါတို့မှာတိကျစွာသိဖို့ကိရိယာအလုံအလောက်ရှိတယ်။ မင်းလားApplication မ်ားက panel ၏ status ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီလိမ့်မည် ကိရိယာ၏။ ဤရွေးချယ်မှုများအကြောင်းလေ့လာရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။
1 Multitouch မြင်နိုင်စမ်းသပ်မှု
၎င်းသည်တတ်နိုင်သောရွေးချယ်စရာများစွာအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် device ကို touchpad status ကိုဝယ်ကြလော့။ ဤ application သည်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူခြင်းအတွက်ထင်ရှားသည်။ ဒါကြောင့်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲတကယ်ပျက်စီးသွားရင်မ ၀ ယ်နိုင်တော့ဘူး။ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်းကြောင့်စဉ်းစားရန်ကောင်းသည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခု။ ကြှနျုပျတို့ ... လုပျနိုငျပါတယျ Play Store မှအခမဲ့ရယူပါ.
လျှောက်လွှာကကျွန်တော်တို့ကိုမေးတယ် လက်ချောင်းကိုဖုန်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်ထောင့်များတွင် ထား၍ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ရွှေ့ကြပါစို့။ ထိုသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာပြင်၏အလယ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ လျှောက်လွှာသည်မျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးကိုမှတ်သားသည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် အချက်များနောက်ကွယ်မှသို့မဟုတ်မရှိမရှိကြည့်ပါ။ ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ ဖန်သားပြင်တွင်အမှားတစ်ခုရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အမှားတွေကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တာကအရမ်းကိုအမြင်အာရုံပါ။
စက်၏ဖန်သားပြင်ကိုစမ်းသပ်ရန်လက်ရှိအပလီကေးရှင်းတစ်ခုရနိုင်သည်။ ဒါဟာဖြစ်ခြင်းအဘို့အထွက်ထင်ရှားတဲ့အခြား option တစ်ခုဖြစ်သည် အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဤကိစ္စတွင်လျှောက်လွှာပြုလိမ့်မည် မျက်နှာပြင်အနက်ရောင်။ ဒါကြောင့်သင်မျက်နှာပြင်ကိုအသာပုတ်ပါ သင်ပြုလုပ်သောဤထိတွေ့မှုသည်မှတ်ပုံတင်မထားကိုစစ်ဆေးပါ။ ဤထိတွေ့မှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိသည့်နေရာများရှိပါကလျှောက်လွှာကပြလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်မင်းဘာကိုတွေ့နိုင်တာလဲ touch panel ၏areasရိယာများတွင်ပြproblemsနာများရှိသည်.
အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သည့် application တစ်ခု Play စတိုးမှအခမဲ့ download လုပ်ပါ.
ဤအရာကိုအတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လျှောက်လွှာများသာရှိသည်မဟုတ်ပါ။ လုပ်နိုင် Android ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုအသုံးပြုပါ။ ၎င်းသည်ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်သည့်နောက်ထပ်အလွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါလမ်းကြောင်းသို့သွားရမည်။ ချိန်ညှိချက်များ> ဖုန်းအကြောင်း> Build နံပါတ်ကိုအကြိမ်များစွာနှိပ်ပါ Developer Options ကိုသက်ဝင်မှီတိုင်အောင်။ ထိုအရာပြီးသည်နှင့်သင်“ Pointer တည်နေရာ” ကို သွား၍“ Show keystrokes” ကိုရှာပါ။ သငျသညျနှစ် ဦး စလုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကို enable ရန်ရှိသည်.
ဤနည်းအားဖြင့်, ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်ဖုန်း၏ထိတွေ့မှုပြသမှုတွင်ပြaနာရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကိရိယာ၏ဘောင်အတွင်းရှိလက်ရှိပျက်စီးမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်ရှင်းလင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒီလမ်းအတန်ငယ်ကြာကြာဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုသယ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ ဒါကြောင့်လည်းကောင်းတစ် ဦး option ကိုဖြစ်ပါတယ်။
La ကိရိယာ၏ဘောင်ပေါ်တွင်ပျက်စီးခြင်းရှိနေခြင်းကိုစစ်ဆေးရန်နောက်ဆုံးသောရွေးချယ်မှုသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် ကုဒ်၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်စမ်းသပ်မှုကုဒ်ဖြစ်သည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းသည်စက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိပျက်စီးမှုများသို့မဟုတ်ပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းပို့သည်။ တစ် ဦး ကအလွန်ရိုးရှင်းပြီးတိုက်ရိုက်လမ်း။ သင်အသုံးပြုရမည့်ကုဒ်မှာဤဖြစ်သည်: * # * # 2664 # * # *
ဤ သင်၏ကိရိယာ၏ touchpad ကိုပျက်စီးမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်နည်းလမ်း ၄ ခုခွင့်ပြုထားသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးတရားဝင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏အကြိုက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၎င်းတို့သည်သင်၏ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဖြစ်နိုင်သောပြfailနာများကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်း၏ touch panel ပျက်စီးခြင်းရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်သနည်း